Sergio Aguero oo shaaca ka qaaday hal sabab uu Lionel Messi kaga tagi karo Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 30 Abril 2020. Weeraryahanka kooxda Manchester City ee Sergio Aguero ayaa xaqiijiyay in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Lionel Messi uu kaga fariisan doono kubadda cagta naadiga Barcelona, isagoo dhinaca kale sheegay in haddii uu ka tago Barca lagu tilmaami karo arrintaas mid musiibo ku ah kooxda.
Lionel Messi oo 32 jir ah ahaa heshiiska uu haatan ku joogo kooxda Barcelona wuxuu dhici doonaa xagaaga 2021, maamulka kooxda ayaa isku dayaya inay kala xaajoodaan laacibkan inuu u cusbooneysiiyo qandaraaska.
Sergio Aguero oo marti ku ahaa Barnaamijka “El Chiringuito” ee dalka Spain ayaa ka hadlay waxyaabo badan uu ka mid yahay Lionel Messi wuxuuna yiri:
“Lionel Messi wuxuu astaan iyo halyeey u noqday kooxda Barcelona, laakiin wax walba ayaa ka dhici kara kubadda cagta”.
“Ciyaartooy badan ayaa waxay ugu soo dhaqaaqeen kooxda Barcelona sababa la xiriira Lionel Messi, wuuna la sii joogaa kooxda maxaa yeelay isagu wuu jecel yahay”.
“Lionel Messi aad ayuu ugu fiican yahay Barcelona, wuuna ku faraxsan yahay halkaas”.
“Wax kasta oo dhaca, hadda wuu sii wadanyaa, wuxuuna ka tagi karaa oo kaliya haddii ay dhacdo arrin musiibo ah”.